आम मानिसको चुनावी अर्थतन्त्र | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण आम मानिसको चुनावी अर्थतन्त्र
आम मानिसको चुनावी अर्थतन्त्र
सामान्य मानिसको जिन्दगी अनेकौं कुराबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छ, जसमा उसको कुनै नियन्त्रण पनि हुँदैन । आजको विश्व परिस्थितिअनुसार अर्थशास्त्रीको चासोको विषय भनेको बढिरहेको आर्थिक असमानता हो । अल्पविकसित देशहरूले अङ्गीकार गरेको उदार आर्थिक प्रणालीमा आम मानिस नै यो आर्थिक असमानताको शिकार भइरहेको हुन्छ । विगतका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने खान लगाउन नपुग्ने एउटा गरीब परिवार आफ्नो आर्थिकस्थिति सुधार गरी खान लाउन पुग्ने अवस्थामा सजिलै पुग्छ । तर, त्यसभन्दा माथि उच्च वर्गमा पुग्न उसले आमबाट विशेष नभई हुँदैन । त्यसैले नेपालजस्तो देशमा निरपेक्ष गरीबी छिट्टै घटेको देखियो, तर आर्थिक असमानता सजिलै घटेन । किनभने सरकारले निम्न वर्गका लागि काम गरिरहँदा र उनीहरूको गरीबी हटाइरहँदा उच्च वर्गलाई अझै बढी फाइदा भइरहेको हुन्छ । किनकि नीति निर्माणको तहमा रहेको त्यो सम्भ्रान्त वर्ग आफूअनुकूल नै अर्थतन्त्रलाई चलाउँछ । त्यसैले मध्यम वर्ग या त आम वा गुमनाम रूपमा रहन्छ, या त उच्च वर्गको तजबिजीमा चलिरहेको हुन्छ भने निम्न गरीबहरू आम रूपमा राजनीतिक खेलका गोटी भइरहन्छन् । उदार पूँजीवादलाई निजी सरकारी साझेदारीमा चलाउँदै आर्थिक पुनर्वितरणबाटै समाजवादको परिकल्पना गरिएको नेपालमा सङ्घीयताले यसलाई गति दिने मानिए पनि केही विश्लेषक यसमा सहमत छैनन् । धेरै वर्षपछि तथा सङ्घीयताको आधारका रूपमा भइरहेको चुनावसँगै देखिएका गतिविधिले पनि अझै शङ्का उत्पन्न गर्दछ कि सोचेअनुरूप नै समाजवाद प्राप्त होला कि नहोला ।
नयाँ संविधानपछिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आम मानिसमा देखिने उत्साहसँगै पैसा मोहले यो कुरा देखाएको थियो कि अधिकांश स्थानीय नेतृत्व उद्योगी व्यवसायी तथा उच्च धनाढ्य वर्गका पक्षमा गएको थियो भने केही युवाहरू, जो राजनीतिलाई कमाउने पेशाकै रूपमा लिन्छन्, तिनले पनि जित हात पारे । यसको अर्थ हो, स्थानीय तहमा राम्रो स्रोत परिचालन भएमा गरीबी न्यूनीकरण चाँडै हुन सक्ने भए तापनि आर्थिक असमानता अझै चरम रूपमा बढ्न सक्नेछ, जसले संविधानलाई समाजवाद उन्मुख कसरी बनाउला ? निर्वाचनको प्रथम र अन्तिम आकर्षण नै पैसा भइरहेछ, जसमा यिनै आमनागरिक भनिने मानिसहरू बढी संलग्न छन् । हामीले भोट सित्तैंमा किन कसैलाई दिने भन्दै यी मानिस भोट विक्रेता बनेर बसेका छन् । जब एउटा व्यवसायी स्थानीय तहको राजनीतिक झमेलाबाट बच्न आफै मेयर वा प्रमुखका रूपमा रहन खोज्छ, उसले भविष्यको सजिलो खोजेको हो । त्यसैले पनि उसले केही लगानी अवश्य गर्छ । करोडौं लगाएर ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएपछि उसले त्यो लगानी उठाउनैपर्छ । त्यति बेला यिनै आममानिसहरू भ्रष्टाचार र कुशासनको पीडामा पिल्सिएर बस्नेछन् ।
एउटा इमानदार र सफल व्यवसायी राजनीतिबाट अछुतो रहेर टिकिरहन सक्दैन । त्यसैले व्यवसायीका रूपमा टिक्न उसले कुनै न कुुनै नेताको फाइनान्सर बन्नैपर्छ । त्योभन्दा त कुनै पार्टीको केन्द्रलाई रिझाएर एउटा तहको टिकट मागी चुनाव जित्यो भने समाजमा महान् नेता बन्न पाइने र अप्रत्यक्ष नै भए पनि आफ्ना लागि व्यवसाय राम्रै सम्हाल्न पनि सकिने हुन्छ । ठूलाठूला व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार नै राजनीतिमा सुहाउने भएका छन् । यो एक किसिमले बुद्धिमत्ता पनि हो । हिजो सडकमा ढुङ्गा हान्दै नेता भएका बुद्धिहीन पुच्छरहरूको सङ्केतमा नाच्दै व्यवसाय गर्नु पर्दैन । आफै नेता भएपछि देश विकास हुन्छ, आफ्नो र केही अरूको पनि व्यवसाय फैलिँदै जान्छ । गरीब निमुखाहरूलाई त्यसैको आस थियो र मतदान गरे । हिजो गाउँघरमा ठगी खाँदै हिँड्ने आवारा आज नेता भएर कुनै गाउँ वा नगरको सम्पत्ति कुम्ल्याउनुभन्दा बरु यिनै सम्भ्रान्तहरू, जसले थोरै भए पनि हिजोसम्म कसैको जीवन चलाएका थिए, तिनले जित्नु मनासिबै हो । शायद, आम मानिसले यही सोच्छन्, भोलि जितेर गएपछि हामीले जानेर वा नजानेर सबै नेताले पैसा खाने नै हुन्, पैसा कमाउन नै चुनाव जित्छन् त्यसैले यिनीहरूलाई मत किन सित्तै दिने ? अलिकति भए पनि पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ । यसैले पनि नेपालजस्तो गरीब देशमा राजनीति तथा निर्वाचन नै एउटा राम्रो व्यवसायका रूपमा देखिँदै छ ।
नेपाली समाजका केही धेरै जान्ने ब्रेन माष्टरहरू आम नागरिक भनिने मतदातालाई आफ्नो बुद्धि विवेकको साङ्लोमा बाँधेर तिनकै नेता बन्न खोजिरहेका हुन्छन् । सबै पार्टीको स्वाद चाखिसकेर सबैभन्दा माथि गएका ती विद्वान्का लागि पनि यस्तै मानिसहरू मिल्छन्, जसले यी पार्टीहरूमा आफ्नो पनि ठाउँ खोज्छन् । तर, गरीब वर्ग जो कुनै पनि पार्टीका बारेमा तटस्थ छ, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, ती मानिस यस्तो पार्टीमा सजिलै तानिँदैनन् । तिनीहरूलाई चुनाव भनेको दुहुनो भैंसी नै हुनुपर्छ । नयाँ पुस्ताका केही युवा यस कार्यमा अति शीपालु भइरहेका छन् ।
गैरकानूनी भनिए पनि चुनावमा हुने पैसाको प्रवाहले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । अर्बौं रुपैयाँको खर्च बढ्छ, लगानी इण्डिकेटरमा पनि उतारचढाव देखिन्छ भने आंशिक रूपमा निर्माण क्षेत्र पनि सक्रिय हुन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको अल्पकालीन विस्तार भई समृद्धिजस्तो देखिन सक्छ । तर, वास्तवमा यसले मूल्यस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भने बजारमा माग र पूर्तिको असन्तुलन देखिन जान्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको जग नै अनियमित चुनावी खर्च हो । अतः चुनावी खर्चको भद्रगोल आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, त्यसभन्दा पनि मानिसको मानसिकतालाई विदीर्ण पार्ने प्रजातन्त्रको एउटा अस्त्र हो, जसले प्रजातन्त्रलाई भाँडभैलो तन्त्र बनाई यसको भविष्यलाई पनि असर गरिरहेछ । केही पश्चिमा बुद्धिजीवीहरू यस विषयमा लेख्न र बोल्न पनि थालिसकेका छन् ।
अहिले नेपालमा सङ्घीय संरचनाको नयाँ अभ्यास भइरहेछ । स्थानीय, सङ्घीय र केन्द्रीय गरी तीन तहमा कार्यकारिणी निकायको निर्वाचन भइरहेछ । यी निर्वाचनको जति राजनीतिक मूल्य छ, त्योभन्दा बढी आर्थिक मूल्य देखिँदै छ । देशमा चुनावी सरगर्मी बढ्नु भनेको आर्थिक प्रवाहको मानसिकता बनी ठूलो हलचल पैदा हुनु हो । कुनै पनि मानिसले चुनावी नतीजाको विश्लेषणको एक मात्र आधार पार्टी वा नेताले गर्ने खर्चलाई लिएका छन्, जसले धेरै खर्च गर्छ त्यसैले जित्छ । आम मतदाता भनिने नागरिकबाहेक कार्यकर्ताहरूको ठोकुवा पनि यही देखिन्छ । पत्रकारहरू आफूलाई सबैभन्दा बढी बुझ्ने प्राणीका रूपमा ठानी के आकलन गर्छन् भने नेपालमा समकालीन निर्वाचनहरू राजनीतिक व्यवसाय बनिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराईजस्ता ब्रेन माष्टर भनिने नेपालका नेताहरूका भनाइमा यो देशमा आजसम्म राजनीतिक परिवर्तनको खाँचो थियो । अब त्यो पूरा भई आर्थिक समृृद्धिको आन्दोलन आवश्यक छ । यसको सीधा अर्थ अब नेताहरू राजनीतिक सिद्धान्त तथा शासकीय परिवर्तनको पछि नभई आर्थिक प्रलोभनको पछि रहेछन् ।
देशको आर्थिक विकास जुन गतिमा होला नेताहरूको आर्थिक समृृद्धि त्योभन्दा द्रुततर गतिमा अवश्य हुनु पर्नेछ । नेपालका ठूला भनिएका पार्टीका शीर्षनेताहरू यी निर्वाचनहरूमा हार्दैन्न किनभने तत्तत् निवार्चन क्षेत्रहरूमा ती नेताको हातमा राज्यशक्तिको ठूला अंश रहेको हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो समयमा माथि उठाएका कर्मचारीदेखि पुलिस र आर्मीसमेत त्यही क्षेत्रमा पुगिसकेका हुन्छन् भने केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रो पकड भइसकेकाले कार्यकर्तादेखि आम जन सामान्य पनि कहीँ न कहीँ अवसर पाइने लोभमा शीर्ष नेताको प्रतिकारमा खुल्न सक्दैनन् । जस्तै डँडेलधुरा जिल्लाबाट लगातार निर्वाचन जितिरहेका नेपाली राजनीतिका पहाड बनिसकेका शेरबहादुर देउवालाई हराउन शायदै डँडेलधुरा बासीले सक्लान् । साम, दाम, दण्ड, भेदको सबै नीति उनको हातमा हुने भएकाले शक्तिको दुरुपयोग गरेरै पनि देउवा निर्वाचन जित्न सक्छन् । अमेरिकामा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति रहँदैनन् । तर, नेपालमा शक्तिशाली नेता कहिल्यै आफ्नो स्थानबाट तल झर्दैनन् ।
वास्तवमा अल्पविकसित देशको राजनीतिमा सबैखाले नेताले पालै पालो कार्यकारी तहमा पुग्नु राम्रो हुन सक्छ । किनकि स्रोत परिचालनको मुद्दा सबै विचारका प्रतिनिधिको साझा प्रयासबाट सफल हुन्छ भने पालैपालो कार्यकर्ता पाल्ने खर्च उठाउन पनि सकिने हुन्छ । हारेकाले पनि कुनै दिन जित्ने मौका पाउँछ भने हार्नै नजान्नेले पनि हारको स्वाद चाख्छ । वास्तवमा नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूलाई हराउँदैमा कुनै पहाड खस्नेछैन । बरु समकालीन पार्टी राजनीतिमा युवा र जोशिला नेताले पालो पाउनेछन् । आम मानिसको चुनावी अर्थतन्त्रले कहिलेकाहीँ अचम्म हुने पनि गर्छ भने भोका, नाङ्गा गरीब जनताको नसुहाउँदो उपभोग प्रवृत्तिका कारण मतदान भनेको मत खरीदविक्री हुनु पनि स्वाभाविकै हो ।